မင်းပြား ပိုက်သည်ကျေးရွာရှိ မွတ်စလင်များ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်မရ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မင်းပြား ပိုက်သည်ကျေးရွာရှိ မွတ်စလင်များ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်မရ
ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့သော မင်းပြားမြို့နယ် ပိုက်သည်ကျေးရွာမှ မွတ်စလင် ကျောင်းသား များ ပညာသင်ကြားရေး အခက်အခဲများရှိနေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးမှ ပြောပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ကျောင်းသား ၂၂၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ဆယ်တန်း ၊ကိုးတန်း ကျောင်းသားတွေပါ။ အကြမ်းဖက် ခံရပြီးနောက် ကလေးတွေလည်း ကျောင်းမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူး” ဟုပိုက်သည် ကျေးရွာမှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ပိုက်သည်ကျေးရွာရှိ ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားငယ်များသည် ရခိုင်လူမျိုးများရှိသော မင်းပြားမြို့ရှိ အထက ကျောင်းသို့ ပဋိပက္ခဖြစ် ပြီးနောက်ပိုင်း သွားတက်ရောက် ခွင့်မရှိတော့ချေ။
“စားနပ်ရိက္ခာကတော့ WFP ၊ Unicef ၊ နောက် မွတ်စလင်ဘာသာရေး အဖွဲ့တွေကနေ အခုတလော ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက နေအိမ်ဖျက်စီးမခံခဲ့ရတဲ့ မွတ်စလင်တွေအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ ခါတိုင်းဆို ရွာသားတွေ က ငါးဖမ်း၊ တောင်ယာ လုပ် ၊ ဈေးရောင်း စတာတွေ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ အခုတော့ လုံခြုံရေးအရ ဆိုပြီး ဘယ်ကိုမှ သွားလာခွင့် မပေးတော့ စားဝတ်နေရေး တော်တော် အခက်တွေ့ရပါတယ်” ဟု ပိုက်သည်ရွာ သားတစ်ဦး က ပြောပါသည်။
ပိုက်သည်ကျေးရွာသည် မင်းပြားမြို့နှင့် ၃ဖာလုံ အကွာတွင်တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ ၂၅၃ အိမ် နှင့် လူဦးရေ ၁၃၅၁ ဦးရှိသော ရိုဟင်ဂျာရွာ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ပိုက်သည်ကျေးရွာအား အောက်တိုဘာလ အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှု့များ တွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား တစုက မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ရခိုင်တို့ အကြမ်းဖက်မှုအား မင်းပြားမှ မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးနှင့် အင်တာဗျူး (Oct 25, 2012)
Rakhines Continue Terror in Myauk U and Minpyar Tonight: More than 100 Died (Oct 23, 2012)
Rakhines Burnt Down Six Muslim Villages in Minpyar:7People Died (Oct 23, 2012)
မင်းပြားတွင် ရခိုင်များ အကြမ်ဖက်မှု့ မွတ်စလင် ရွာ ၆ ရွာ ပြာကျ၊ ၇ ယောက်သေဆုံး (Oct 23, 2012)
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားနှင့် မြောက်ဦးတွင် မွတ်စလင်မ်ရွာများ မီးရှို့ဖျက်ဆီး အကြမ်းဖက်ခံနေရ (Oct 22, 2012)
This entry was posted on December 18, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ပသီအမျိုးသားကွန်ကရက်အမည်ဖြင့်ခွင့်မပြုသည့် အတွက် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ကရက် အမည်ဖြင့် ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရ …
သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကြမ်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ →